Naqshadeynta is-dhexgalka isticmaalaha: casharrada laga qaado wiishka Indianapolis | Blog MarTech
Intii aan imanayay ama ka imanayay kulan maalin dhaweyd, waxaan ku fuulnay wiish wixi sidan lahaa naqshadeynta adeegsadaha:
Waxaan qiyaasayaa taariikhda wiishkan inuu sidan u socdo:
Wiishka ayaa loo qaabeeyey oo loo keenay si toos ah oo sahlan, oo si fudud loo isticmaali karo istcimaalaha isticmaalaha sida tan:
Shuruud cusub ayaa soo baxday: "Waxaan u baahanahay inaan taageerno indhoolayaasha!"
Halkii aad dib u qaabeyn ugu sameyn laheyd adeegsadeha si sax ah, dheeraad ah Naqshadeynta ayaa kaliya lagu soo koobay naqshaddii asalka ahayd.
Shuruudaha ayaa la buuxiyay. Dhibaatada la xaliyay. Mise waxay ahayd?
Waxaan nasiib u helay inaan daawado laba qof oo kale oo wiishka ku socda oo iskudayaya inaan doorto dabaqooda. Mid baa riixay “batoonka” farta indhoolaha (malaha maxaa yeelay wuu ka weynaa oo wuxuu kaga duwanaa asalka - ma aqaano) ka hor inta uusan ogaan inuusan aheyn badhan gabi ahaanba Xoogaa way fuuqday (waan fiirinayay), waxay riixday badhanka dhabta ah ee isku daykeedii labaad. Qof kale oo dabaqa kale fuulay wuxuu joojiyay fartiisa bartamihiisa - si uu u falanqeeyo xulashadiisa. Si sax ah ayuu u qiyaasey, laakiin maahan isaga oo aan si taxaddar leh uga fikirin.
Waxaan jeclaan lahaa inaan indha indheeyo qof aragga naafo ka ah oo isku dayaya inuu isticmaalo wiishkan. Si kastaba ha noqotee, muuqaalkan indhoolayaasha ah ayaa si gaar ah loogu daray iyaga. Laakiin sidee indhooleyaasha farta ugu fiiqaya badhan aan xitaa badhanku u oggolaan karin qofka aragga naafada ka ah inuu doorto dabaqooda? Taasi ma ahan oo keliya mid aan waxtar lahayn; taas micnaheedu waa. Dib-u-habeynta adeegsadahan adeegsigu kaliya kuma guul darreysan inuu wax ka qabto baahiyaha kuwa aragga naafada ka ah, laakiin sidoo kale waxay ka dhigtay khibrad isticmaale wareer dadka isticmaala aragtida leh.
Waxaan garwaaqsaday inay jiraan dhammaan noocyada kharashyada iyo carqaladaha lagu beddelayo is-dhexgalka jirka sida badhamada wiishka. Si kastaba ha noqotee, ma lihin caqabado isku mid ah websaydhyadayada, barnaamijyada websaydhka, iyo barnaamijyada moobiilka. Marka ka hor intaadan ku darin astaamahaas cusub ee qabow, hubi inaad ku fulineyso qaab run ahaantii daboolaya baahi cusub oo aan abuureyn dhibaato cusub. Sida had iyo jeer, isticmaalaha tijaabi si loo hubiyo!
May 10, 2011 at 11: 06 AM
Maqaalka weyn John. Toosan horay, qosol iyo barta.
May 11, 2011 at 2: 01 PM
Haa taasi waa khariidaynta badhanka naxdinta leh… waxay i xasuusineysaa codbixintii madaxweynenimada Koonfurta Florida ee 2000 http://bit.ly/mJCER7
May 12, 2011 at 12: 10 PM
yep, qaabeynta codbixinta ayaa ah mid ka mid ah waqtigeyga oo dhan ee aan ku jeclaado barashada kiisaska UI poor
Jun 14, 2016 saacadu markay ahayd 5:48 AM
Naqshad qabow, qoraal fiican, qaabeeyahaas wuxuu umuuqdaa mid la yaqaan oo raaxo leh